Uhambo losuku oluya eSalzburg lusuka eVienna
↓ I-Zum Inhalt
I-Prague Food Tour
Corpus Christi e-Austria
I-Karst Hiking Trail
E-Neustadt yaseSalzburg, ebizwa nangokuthi i-Andräviertel, enyakatho ye-Mirabell Gardens, kunendawo enotshani eyinqwaba, eyenziwe imodeli, indawo ekahle, ebizwa ngokuthi i-Kurpark, lapho kwadalwa khona indawo ezungeze i-Andräkirche ngemva kokucekelwa phansi kwezakhiwo ezinkulu zangaphambili. . Ingadi ye-spa iqukethe izihlahla ezindala ezimbalwa ezifana ne-linden yasebusika nehlobo, i-cherry yaseJapane, i-robinia, isihlahla se-katsura, isihlahla sendiza kanye ne-maple yaseJapane.
Umzila wezinyawo onikezelwe kuBernhard Paumgartner, owaduma ngemibhalo yakhe yokuphila mayelana ne-Mozart, igudla umngcele nedolobha elidala futhi ixhuma i-Mariabellplatz nomnyango osuka e-Kurpark oya esitezi esiphansi esincane, engxenyeni esenyakatho ye-Mirabell Gardens. Nokho, ngaphambi kokuthi ungene ezingadini ungase ufune ukuthola indlu yangasese yomphakathi kuqala.
Uma ubuka iSalzburg phezulu uyabona ukuthi leli dolobha lisemfuleni futhi lizungezwe amagquma amancane nhlangothi zombili. Eningizimu-ntshonalanga yi-arc yendingilizi ehlanganisa i-Festungsberg ne-Mönchsberg futhi enyakatho-mpumalanga yi-Kapuzinerberg.
Intaba eyinqaba, i-Festungsberg, ingesonqenqemeni olusenyakatho yeSalzburg Pre-Alps futhi iqukethe ikakhulukazi i-limestone yase-Dachstein. I-Mönchsberg, i-Monks' Hill, iqukethe i-conglomerate futhi ixhuma ngasentshonalanga kwentaba yenqaba. Ayidonswanga yiSalzach Glacier ngoba imi ethunzini lentaba eyinqaba.
I-Kapuzinerberg, ngakwesokunene somfula njengentaba eyinqaba, ingeyonqenqema olusenyakatho yeSalzburg Limestone Pre-Alps. Iqukethe ubuso bamadwala aphakeme kanye ne-crest ebanzi futhi yakhiwe kakhulu nge-limestone yase-Dachstein enemibala egqamile kanye netshe le-dolomite. Umphumela wokukhuhla we-Salzach Glacier unikeze i-Kapuzinerberg ukuma kwayo.
Indlu Yangasese Yomphakathi e-Mirabell Gardens Square e-Salzburg
I-Mirabell Gardens ivame ukuba yindawo yokuqala yokuvakashela ohambweni losuku oluya e-Salzburg. Amabhasi afika eSalzburg City avumela abagibeli bawo behle I-T-junction yomgwaqo iParis-Lodron ene-Mirabell Square ne-Dreifaltigkeitsgasse, isikhumulo sebhasi enyakatho. Ngaphezu kwalokho kukhona indawo yokupaka izimoto, I-CONTIPARK Parkplatz Mirabell-Congress-Garage, e-Mirabell Square lapho ikheli layo eliqondile lingu-Faber Straße 6-8. Lokhu isixhumanisi ukuze ufike endaweni yokupaka izimoto nge-google maps. Ngaphesheya komgwaqo e-Mirabell Square inombolo 3 kunendlu yangasese yomphakathi mahhala. Lesi sixhumanisi esiya ku-google maps ikunikeza indawo eqondile yendlu yangasese yomphakathi ukuze ikusize ekutholeni ngaphansi kwesakhiwo esingaphansi komthunzi esihlinzeka ngezihlahla.
I-Unicorn eSalzburg Mirabell Gardens
Izitezi zemabula ze-neo-baroque, zisebenzisa izingxenye ze-balustrade ezivela endaweni yaseshashalazini ediliziwe kanye nemifanekiso ye-unicorn, ixhuma i-Kurgarten enyakatho nephansi elincane le-Mirabell Gardens eningizimu.
I-unicorn iyisilwane esibukeka njenge ihhashi nge uphondo ebunzini layo. Kuthiwa iyisilwane esinolaka, esinamandla futhi esiwubukhazikhazi, uxhaxha lwezinyawo kangangokuthi singabanjwa kuphela uma kubekwa intombi eyintombi phambi kwaso. I-unicorn igxumela emathangeni entombi, iyayincela futhi iyiholele esigodlweni senkosi. Izinyathelo zethala zisetshenziswe njengesikali somculo esigxumagxumayo ngu-Maria kanye nezingane ze-von Trapp Emsindweni Womculo.
Ama-Unicorns at Steps to Mirabell Gardens
Ama-unicorns amabili amatshe amakhulu, amahhashi anophondo ekhanda lawo, alele emilenzeni yawo aqapha "Izinyathelo Zomculo", isango lomnyango osenyakatho oya eMirabell Gardens. Amantombazane amancane, kodwa acabangayo ajabule ukuwagibela. Ama-unicorn avele alale phansi ezitebhisini ukuze amantombazane amancane akwazi ukuwanyathela ngokuqondile. Izilwane zasesango zibonakala zibhebhethekisa imicabango yamantombazane. Umzingeli kuphela ongayenga i-unicorn ngentombi emsulwa esencane. I-unicorn ikhangwa into engakhulumeki.
I-Mirabell Gardens ibukwe ku-"The Musical Steps"
I-Mirabell Gardens iyingadi ye-baroque e-Salzburg eyingxenye ye-UNESCO World Heritage Historic Centre yeDolobha laseSalzburg. Ukuklanywa kwezingadi ze-Mirabell ngendlela ekuyo njengamanje kwagunyazwa uMbhishobhi Omkhulu u-Johann Ernst von Thun ngaphansi kokuqondisa kuka-Johann Bernhard Fischer von Erlach. Ngo-1854 iMirabell Gardens yavulelwa umphakathi nguMbusi uFranz Joseph.
I-Mirabell Palace yakhiwa ngo-1606 yinkosana-umbhishobhi omkhulu uWolf Dietrich esenzela isithandwa sakhe uSalome Alt. I-"Baroque Marble Staircase" iholela ehholo leMarble laseMirabell Palace. Izitezi ezidumile zezindiza ezine (1722) zisekelwe ekwakhiweni kuka-Johann Lucas von Hildebrandt. Yakhiwa ngo-1726 nguGeorg Raphael Donner, umqophi obaluleke kakhulu wase-Central Europe wesikhathi sakhe. Esikhundleni se-balustrade, ivikelwe ngamapharamitha acatshangelwayo enziwe ngama-C-arcs nama-volutes anemihlobiso ye-putti.
Mude, onezinwele ezibomvu ezinsundu namehlo ampunga, uSalome Alt, owesifazane omuhle kakhulu edolobheni. U-Wolf Dietrich wazana naye ngesikhathi somcimbi wokuzijabulisa egumbini leziphuzo lasedolobheni e-Waagplatz. Lapho amabhodi asemthethweni omkhandlu wedolobha ayebanjelwa futhi izenzo zezemfundo zaphela. Ngemva kokukhethwa kwakhe njengeNkosana uMbhishobhi uWolf Dietrich wazama ukuthola isikhathi sokubusa okwakungenzeka ukuthi yena njengomfundisi ashade. Naphezu kwemizamo yokulamula kamalume wakhe, uCardinal Marcus Sitticus von Hohenems, le phrojekthi yehlulekile. Ngo-1606 waba ne-Altenau Castle, manje ebizwa ngokuthi i-Mirabell, eyakhelwe i-Salome Alt, emodelwe "e-Ville suburbane" yamaRoma.
Pegasus phakathi Lions
I-Bellerophon, iqhawe elikhulu nombulali wezilo ezinkulu, ugibele ihhashi elindizayo elibanjiwe. Umsebenzi wakhe omkhulu kwakuwukubulala lesi silo Chimera, isidumbu sembuzi esinekhanda lengonyama nomsila wenyoka. I-Bellerophon yazuza ukungathandeki konkulunkulu ngemuva kokuzama ukugibela i-Pegasus ukuya Mount Olympus ukuze ubajoyine.
Umthombo wePegasus ukuthi u-Maria nezingane bagxume baphume Emsindo Womculo ngenkathi becula i-Do Re Mi. Pegasus, the wasenganekwaneni ophezulu ihhashi uyinzalo ka I-Olympian Unkulunkulu Poseidon, unkulunkulu wamahhashi. Kuyo yonke indawo ihhashi elinamaphiko lashaya inselo emhlabeni, kwaqhuma umthombo wamanzi ashisayo.
Amabhubesi Agadile I-Bastion'Izitezi
Amabhubesi amabili amatshe alele odongeni lwenqaba, enye ngaphambili, enye iphakanyiswe kancane ibheke esibhakabhakeni, iqapha indlela yokungena kusukela phansi encane eya engadini yasensimini. Kwakukhona amabhubesi amathathu ejazini lezikhali le-Babenbergs. Kwesokudla sejazi lezikhali lesifunda sase-Salzburg kunebhubesi elimnyama eliqondile elijike kwesokudla linegolide futhi kwesokunxele, njengasejazini lezikhali lase-Babenberg, libonisa ibha yesiliva ebomvu, isihlangu sase-Austrian.
I-Zwergerlgarten, i-Dwarf Gnome Park
Ingadi encane, enezithombe ezenziwe ngemabula yaseMount Untersberg, iyingxenye yengadi eyi-baroque Mirabell eklanywe nguFischer von Erlach. Esikhathini se-baroque, abantu abakhulile nabafushane babeqashwe ezinkantolo eziningi zaseYurophu. Babehlonishwa ngenxa yobuqotho nokwethembeka kwabo. Ama-dwarves kufanele asuse konke okubi.
I-bosquet ye-baroque evamile “kwakuwukhuni” olusikwe ngobuciko kancane engadini ye-baroque i-Mirabell ka-Fischer von Erlach. Izihlahla nothango kwakunqanyulwa i-eksisi eqondile enobubanzi obufana nehholo. Ngakho-ke i-bosket yakha umlingani wesakhiwo senqaba namaphasishi aso, izitebhisi namahholo futhi yabuye yasetshenziswa ngendlela efanayo nengaphakathi lenqaba ekwenzeni amakhonsathi e-chamber nezinye izinto zokuzijabulisa ezincane. Namuhla ibhoksi elingasentshonalanga le-Mirabell Castle liqukethe "i-avenue" enemigqa emithathu yezihlahla ze-linden zasebusika, ezigcinwa ngendlela emise okwekhiyubhu ngokusikeka okujwayelekile, kanye ne-arcade ene-arch trellis eyindilinga, uthango lomhubhe U-Maria nezingane bagijima behla ngenkathi becula i-Do Re Mi.
Ama-tulips abomvu edizayini yombhede wezimbali we-baroque engadini enkulu ye-parterre ye-Mirabell Gardens, ubude bayo buqondiswe eningizimu ngasendleleni yenqaba yase-Hohensalzburg ngaphezu kwedolobha elidala ukuya kwesokunxele se-Salzach. Ngemuva kokuhlukaniswa kwe-Archdiocese yaseSalzburg ngo-1811, ingadi yabuye yahunyushwa ngesitayela samanje sengadi yesiNgisi nguCrown Prince Ludwig waseBavaria, nengxenye yezindawo ze-baroque ezigcinwe.
Ngo-1893, indawo engadini yancishiswa ngenxa yokwakhiwa kweSalzburg Theatre, okuyisakhiwo esikhulu esiseduze neningizimu-ntshonalanga. ISalzburg State Theatre eMakartplatz yakhiwa inkampani yaseViennese iFellner & Helmer, eyayigxile ekwakhiweni kwezinkundla zemidlalo yaseshashalazini, njengeNew City Theatre ngemva kwenkundla yemidlalo yaseshashalazini endala, eyakhiwa uMbhishobhi Omkhulu u-Hieronymus Colloredo ngo-1775 esikhundleni se-ballroom. zidilizwe ngenxa yokushoda kwezokuphepha.
Imifanekiso eqoshiwe yababiyeli be-Borghesi emnyango waseMakartplatz ifana ncamashi nekhophi esekelwe emfanekisweni wasendulo wekhulu le-17 owatholwa eduze neRoma futhi oseLouvre manje. Isifanekiso sasendulo esilingana nempilo yeqhawe elilwa nomgibeli sibizwa ngokuthi i-Borghesian fencer. I-Borghesian fencer ihlukaniswa ngokuthuthuka kwayo okuhle kakhulu kwe-anatomical ngakho-ke yayingesinye sezithombe ezibaziwe ezithakaselwa kakhulu kwezobuciko beRenaissance.
I-Holy Trinity Church, eDreifaltigkeitskirche
Ngo-1694 uMbhishobhi Omkhulu u-Johann Ernst Graf Thun kanye no-Hohenstein banquma ukwakha indlu yabapristi entsha' yamakolishi amabili asungulwa nguye kanye nesonto elinikezelwe kuZiqu-zintathu Ongcwele, i-Dreifaltigkeitskirche, emngceleni osempumalanga wengadi ye-Hannibal yangaleso sikhathi, endaweni emithambekeni. indawo ephakathi kwesango lenkathi ephakathi nesigodlo seMannerist Secundogenitur. Namuhla, isikwele saseMakart, okwakuyingadi yase-Hannibal yangaphambili, igcwele ingaphambili lesonto le-Holy Trinity Church elakhiwe ngu-Johann Bernhard Fischer von Erlach maphakathi nezakhiwo zasekolishi, indlu yabapristi entsha'.
Indlu kaMozart eMakart Square eSalzburg
Ku-“Tanzmeisterhaus”, indlu No. 8 ku-Hannibalplatz, isikwele esikhuphukayo, esincane, esingunxande esiqondaniswe ne-axis yobude ku-Trinity Church, eyaqanjwa kabusha ngokuthi i-Makartplatz ngesikhathi sokuphila komdwebi owaqokwa e-Vienna nguMbusi u-Franz Joseph I. umpetha womdanso wasenkantolo ubambele izifundo zomdanso. izicukuthwane, uWolfgang Amadeus Mozart nabazali bakhe babehlala efulethini esitezi sokuqala kusukela ngo-1773 waze wathuthela eVienna ngo-1781, manje okuyimnyuziyamu ngemva kwefulethi eliseGereidegasse lapho uWolfgang Amadeus Mozart azalelwa khona lase lincane.
I-Holy Trinity Church Facade
Phakathi kwemibhoshongo ephumela ngaphandle, i-facade ye-Holy Trinity Church inyakaza emgodleni phakathi nefasitela eliyindilinga eliyi-arch elinezintambo, phakathi kwama-pilaster aphindwe kabili kanye nokwethulwa, amakholomu aphindwe kabili, akhiwe ngu-Johann Bernhard Fischer von Erlach kusukela ngo-1694 kuya ku-1702. Imibhoshongo nhlangothi zombili enezinsimbi namagebhula wewashi. Egunjini elingaphansi, ijazi lomsunguli elinengwevu nenkemba, njengemfanelo yendabuko yesithombe sikaMbhishobhi Omkhulu u-Johann Ernst von Thun no-Hohenstein, owasebenzisa amandla akhe okomoya nawezwe. I-concave central bay imema isibukeli ukuba sisondele futhi singene esontweni.
I-Dreifaltigkeitskirche Tambour Dome
Ithambori, isixhumanisi sefasitela elixhumayo, eliyisilinda, elivulekile phakathi kwesonto nedome, lihlukaniswe laba amayunithi ayisishiyagalombili anamafasitela amancane angunxande ngokusebenzisa izinsika ezikabili ezintekenteke. I-dome fresco yenziwa nguJohann Michael Rottmayr cishe ngo-1700 futhi ibonisa ukugcotshwa kukaMaria ngosizo lwezingelosi ezingcwele, abaprofethi kanye nezinzalamizi.
Ophahleni kukhona itambour yesibili encane kakhulu futhi eyakhiwe ngamafasitela angama-rectangular. U-Johann Michael Rottmayr wayengumdwebi ohlonishwa kakhulu futhi omatasatasa we-Baroque yakuqala e-Austria. Waziswa kakhulu uJohann Bernhard Fischer von Erlach, ngokwemiklamo yakhe iBandla likaZiqu-zintathu elakhiwa uMbhishobhi Omkhulu uJohann Ernst von Thun kanye noHohenstein kusukela ngo-1694 kuya ku-1702.
Igumbi eliyisiyingi eliyinhloko libuswa ukukhanya okukhanya efasiteleni eliyisiyingi elitholakala ngaphezu kwe-altare elikhulu, elihlukaniswe ngonxande abancane, lapho onxande abancane behlukaniswa khona babe okuthiwa ngamapaneli e-slug endaweni ye-honeycomb offset. I-altare eliphakeme ekuqaleni livela ekwakhiweni kuka-Johann Bernhard Fischer von Erlach. I-altare reredos iyi-aedicula, isakhiwo semabula esinama-pilaster kanye ne-arch gable eyisicaba. UZiqu-zintathu Ongcwele nezingelosi ezimbili ezikhulekelayo ziboniswa njengeqembu lepulasitiki.
Ipulpiti elinesiphambano somshumayeli lishuthekwa odongeni kwesokudla. Ama-pews asezindongeni ezine ezine-diagonal endaweni yemabula, enephethini egcizelela i-oval yekamelo. Ku-crypt kune-sarcophagus enenhliziyo yomakhi uMbhishobhi Omkhulu u-Johann Ernst Count Thun no-Hohenstein esekelwe kumklamo ka-Johann Bernhard Fischer von Erlach.
I-Linzer Gasse, umgwaqo omkhulu omude wedolobha elidala lase-Salzburg osebeni olungakwesokudla lwe-Salzach, uhola okhuphukayo usuka e-Platzl uya e-Schallmoserstraße ubheke e-Vienna. Ngokushesha ngemva kokuqala kwe-Linzer Gasse ekuphakameni kweStefan-Zweig-Platz iSango likaFrancis litholakala ngakwesokudla, eningizimu, ohlangothini lwe-Linzer Gasse. Isango likaFrancis liyiphaseji eliphakeme elinezitezi ezi-2, isango elifaniswe ne-rustic eliya ku-Stefan-Zweig-Weg eliya e-Francis Port futhi lidlulele esigodlweni sezindela saseCapuchin eCapuzinerberg. Emaphethelweni e-archway kune-cartridge yamasosha eqoshiwe enejazi lezingalo lika-Count Markus Sittikus waseHohenems, kusukela ngo-1612 kuya ku-1619 umbhishobhi we-archfoundation i-Salzburg, umakhi weSango likaFrancis. Ngenhla kwe-cartridge yebutho kukhona impumuzo lapho ukucwaswa kwe-HL. UFrancis ekufomeni ngegable evutheliwe uyakhonjiswa, kusukela ngo-1617.
Izihlangu zekhala e-Linzer Gasse Salzburg
Ukugxila kwesithombe esithathwe ku-Linzer Gasse kubakaki bensimbi abakhandiwe, ababuye baziwe njengezihlangu zekhala. Izihlangu zekhala ezenziwe ngobuciko zenziwe ngensimbi ngabakhandi bensimbi kusukela ngeNkathi Ephakathi. Ubuciko obukhangiswayo budonswa ukunakwa ngezimpawu ezinjengokhiye. Izinhlangano yizinkampani zezingcweti ezadalwa ngeNkathi Ephakathi ukuze kuvikelwe izithakazelo ezifanayo.
Ku-Linzer Gasse no. 41 kukhona iBandla laseSebastians elinohlangothi lwalo olude oluseningizimu-mpumalanga nombhoshongo walo ongaphambili ohambisana neLinzer Gasse. Isonto lokuqala likaSt. Sebastian laqala ngo-1505-1512. Yakhiwa kabusha kusukela ngo-1749-1753. I-altare eliphakeme ku-apse eyindilinga ehoxisiwe linesakhiwo semabula esigoqe kancane esinenqwaba yezinsika, kwethulwe izinsika ezimbili, i-cranked entablature eqondile kanye ne-volute top. Phakathi nendawo isifanekiso esinoMariya nomntwana kusukela cishe ngo-1610. Kulesi siqephu kukhona ukukhululeka kukaSaint Sebastian kusukela ngo-1964.
Amathuna asePortal Sebastian Salzburg
Ukufinyelela emathuneni ase-Sebastian kusukela e-Linzer Straße kuphakathi kwekhwaya ye-Sebastian Church kanye ne-Altstadthotel Amadeus. Ingosi ye-arch eyisiyingi, ezungezwe ama-pilaster, i-entablature kanye nephezulu ukusuka ku-1600 ene-gable eshaywayo, equkethe ijazi lomsunguli nomakhi, uMbhishobhi Omkhulu uWolf Dietrich.
Amathuna aseSebastian axhuma enyakatho-ntshonalanga yeSonto LaseSebastian. Yakhiwa kusukela ngo-1595-1600 egameni likaMbhishobhi Omkhulu uWolf Dietrich esikhundleni samathuna ayekhona kusukela ekuqaleni kwekhulu le-16, elifanekisela i-Italian Campi Santi. I-Camposanto, isiNtaliyane esisho "insimu engcwele", igama lesiNtaliyane lendawo yamathuna evalekile efana negceke enomgwaqo ovulekile phakathi. Amathuna aseSebastian azungezwe yizinsika zezinsika nhlangothi zonke. Ama-arcade anezivikelo eziqinile phakathi kwamabhande anama-arched.
I-Mozart Grave Salzburg
Ensimini yamathuna aseSebastian eduze kwendlela eya e-mausoleum, umshisekeli weMozart uJohann Evangelist Engl wayenethuna lokubukisa elakhiwe elinethuna lomndeni wakwaNissen. UGeorg Nikolaus Nissen waba nomshado wesibili noConstanze, umfelokazi uMozart. Ubaba kaMozart uLeopold nokho wangcwatshwa endaweni ebizwa ngokuthi ithuna lomphakathi elinenombolo 83, namuhla eyithuna lase-Eggersche ohlangothini oluseningizimu lwamathuna. UWolfgang Amadeus Mozart ubekwe endaweni yakhe yokugcina e-St. Marx e-Vienna, unina e-Saint-Eustache e-Paris kanye nodadewabo uNannerl e-St. Peter e-Salzburg.
I-Munich Kindl yaseSalzburg
Ekhoneni lesakhiwo ekhoneni le-Dreifaltigkeitsgasse / Linzer Gasse, okuthiwa "Münchner Hof", isithombe sinamathiselwe emaphethelweni angaphandle esitezi sokuqala, esibonisa indela eyenziwe ngesitayela enezingalo eziphakanyisiwe, isandla sobunxele sibambe. incwadi. Ijazi lezikhali elisemthethweni laseMunich liyindela ephethe incwadi yesifungo esandleni sayo sobunxele, futhi yenza isifungo kwesokudla. Ijazi lezikhali laseMunich laziwa ngeMünchner Kindl. I-Münchner Hof ime lapho kwakumi khona indlu yezihambi endala kunazo zonke e-Salzburg, i-"Goldenes Kreuz-Wirtshaus".
I-Salzach igeleza enyakatho ingene endlini yezihambi. Iqanjwe ngemikhumbi kasawoti eyayisebenza emfuleni. Usawoti ovela ku-Hallein Dürrnberg wawuwumthombo obaluleke kakhulu wemali engenayo kubabhishobhi abakhulu baseSalzburg. I-Salzach ne-Inn igijima emngceleni neBavaria lapho kwakukhona khona amadiphozi kasawoti eBerchtesgaden. Zombili lezi zimo zihlangene zakha isisekelo sezingxabano phakathi koMbhishobhi Omkhulu waseSalzburg naseBavaria, okwafinyelela umvuthwandaba wazo ngo-1611 ngokuthathwa kweBerchtesgaden nguMbhishobhi Omkhulu uWolf Dietrich. Ngenxa yalokho, uMaximilian I, uMbusi waseBavaria, wathatha iSalzburg futhi waphoqa uMbhishobhi Omkhulu uWolf Dietrich ukuba ashiye esikhundleni.
Ngekhothamo lehholo ledolobha ungena esigcawini sehholo ledolobha. Ekupheleni kwesikwele sehholo ledolobha umbhoshongo wehholo ledolobha umi eksisi eseceleni ye-rococo facade yesakhiwo. Umbhoshongo wehholo ledolobha elidala umiswe ama-pilaster amakhulu ngaphezu kombhoshongo onama-pilaster ekhoneni. Embhoshongweni kunombhoshongo omncane wensimbi oyi-hexagonal onedome enezingxenye eziningi. Umbhoshongo wensimbi uqukethe izinsimbi ezimbili ezincane kusukela ngekhulu le-14 nele-16 kanye nensimbi enkulu yekhulu lama-20. NgeNkathi Ephakathi, izakhamuzi zazithembele ensimbini, njengoba iwashi lombhoshongo lanezelwa kuphela ngekhulu le-18. Insimbi inikeze izakhamuzi umuzwa wesikhathi futhi yayikhala uma kusha.
I-Alte Markt iyisikwele esingunxande esithintwa ohlangothini olusenyakatho oluncane ngomgwaqo i-Kranzlmarkt-Judengasse futhi enwebeka ngendlela ewunxande eningizimu futhi ivuleke ibheke endaweni yokuhlala. Isikwele sakhiwe umugqa ovaliwe wezindlu zamadolobha ezinezitezi ezi-5 kuya kweziyisi-6, eziningi zazo ezenkathi ephakathi noma kusukela ngekhulu le-16. Izindlu ngokwengxenye zingu-3- kuya ku-4-, ngokwengxenye 6- kuya ku-8-eksisi futhi ikakhulukazi zinamafasitela ohlaka oluwunxande kanye nama-eave anephrofayili.
Ukudlondlobala kwama-facade azacile acashelwe anama-canopies amafasitela aqondile, ukuhlobisa kwesitayela se-slab noma ukuhlobisa okuthambile kusukela ngekhulu le-19 kuyanquma ngesimilo sesikhala. Isitayela sikaJosephine slab sasebenzisa izakhiwo ezilula ezindaweni ezingaphansi kwedolobha, ezazihlakaze ukuhleleka kwe-tectonic kwaba izendlalelo zezindonga nama-slabs. Maphakathi nesikwele esiseduze ku-Alter Markt kukhona umthombo wemakethe wangaphambili, ongcweliswe ku-St. Florian, nekholomu ye-Floriani phakathi nomthombo.
Umgodi womthombo oyi-octagonal owenziwe ngemabula yase-Untersberg wakhiwa ngo-1488 esikhundleni somthombo omdala wokudonsa ngemva kokuba kwakhiwe ipayipi lamanzi okuphuza lisuka eGersberg phezu kwebhuloho ledolobha liya emakethe endala. I-grille evunguzayo ehlotshisiwe, ependiwe emthonjeni yaqala ngo-1583, izintambo zazo ezigcina ziyizinto ezimbi ezenziwe ngeshidi lensimbi, ama-ibexes, izinyoni, abagibeli namakhanda.
I-Alte Markt iyisikwele esingunxande esithintwa ohlangothini olusenyakatho oluncane ngomgwaqo i-Kranzlmarkt-Judengasse futhi enwebeka ngendlela engunxande eningizimu futhi ivuleke ibheke endaweni yokuhlala.
Isikwele sakhiwe umugqa ovaliwe wezindlu zamadolobha ezinezitezi ezi-5 kuya kweziyisi-6, eziningi zazo ezenkathi ephakathi noma kusukela ngekhulu le-16. Izindlu ngokwengxenye zingu-3- kuya ku-4-, ngokwengxenye 6- kuya ku-8-eksisi futhi ikakhulukazi zinamafasitela ohlaka oluwunxande kanye nama-eave anephrofayili.
Ukudlondlobala kwama-facade azacile acashelwe anama-canopies amafasitela aqondile, ukuhlobisa kwesitayela se-slab noma ukuhlobisa okuthambile kusukela ngekhulu le-19 kuyanquma ngesimilo sesikhala. Isitayela sikaJosephine slab sasebenzisa izakhiwo ezilula ezindaweni ezingaphansi kwedolobha, ezazihlakaze ukuhleleka kwe-tectonic kwaba izendlalelo zezindonga nama-slabs. Izindonga zezindlu zazihlotshiswe ngemicu ye-pilaster esikhundleni sama-pilaster amakhulu.
Maphakathi nesikwele esiseduze ku-Alter Markt kukhona umthombo wemakethe wangaphambili, ongcweliswe ku-St. Florian, nekholomu ye-Floriani phakathi nomthombo. Umgodi womthombo oyi-octagonal owenziwe ngemabula yase-Untersberg wakhiwa ngo-1488 esikhundleni somthombo omdala wokudonsa ngemva kokuba kwakhiwe ipayipi lamanzi okuphuza lisuka eGersberg phezu kwebhuloho ledolobha liya emakethe endala. I-Gersberg isendaweni eseningizimu-ntshonalanga phakathi kwe-Gaisberg ne-Kühberg, okuyindawo ephansi esenyakatho-ntshonalanga ye-Gaisberg. I-grille evunguzayo ehlotshisiwe, ependiwe emthonjeni yaqala ngo-1583, izintambo zazo ezigcina ziyizinto ezimbi ezenziwe ngeshidi lensimbi, ama-ibexes, izinyoni, abagibeli namakhanda.
Ezingeni leFlorianibrunnen, ohlangothini olusempumalanga yesikwele, endlini engunombolo. 6, ikhemisi lenkantolo yesikhulu-umbhishobhi omkhulu elasungulwa ngo-1591 endlini enamafasitela e-baroque asekupheleni kwesikhathi nophahla olunama-apex volutes kusukela maphakathi nekhulu le-18.
Ikhemisi elidala lenkantolo yenkosi u-archbishop esitezi esiphansi linesitolo esine-3-eksisi ngaphambili kusukela cishe ngo-1903. Ikhemisi eligciniwe, amagumbi okusebenzela ekhemisi, anamashalofu, itafula lencwadi kadokotela kanye nemikhumbi namathuluzi asukela ekhulwini le-18 yiRococo. . I ikhemisi yaqale yatholakala endlini engumakhelwane ongunombolo 7 futhi yabe isidluliselwa endaweni okuyo njengamanje, indlu engunombolo. 6, ngo-1903.
Ikhafeyi Tomaselli e-Alter Markt No. 9 eSalzburg yasungulwa ngo-1700. Iyikhefi endala kunazo zonke e-Austria. UJohann Fontaine, owayevela eFrance, wanikwa imvume yokuphakela ushokoledi, itiye nekhofi eGoldgasse eseduze. Ngemva kokushona kukaFontaine, indawo yokugcina ikhofi yashintsha izandla izikhathi eziningana. Ngo-1753, indlu yekhofi yase-Engelhardsche yathathwa u-Anton Staiger, umphathi wenkantolo ka-Archbishop Siegmund III. Bala Schrattenbach. Ngo-1764 u-Anton Staiger wathenga "indawo yokuhlala ka-Abraham Zillnerische ekhoneni lemakethe endala", indlu ene-facade ene-axis engu-3 ebheke i-Alter Markt kanye ne-facade yama-axis angu-4 ebheke e-Churfürststrasse futhi yahlinzekwa ngodonga olusezingeni eliphansi futhi amafasitela amafreyimu cishe ngo-1800. U-Staiger waphendula indlu yekhofi yaba isikhungo esihle sekilasi eliphezulu. Amalungu omkhaya wakwaMozart nowakwaHaydn nawo afika njalo Ikhafeyi Tomaselli. U-Carl Tomaselli wathenga ikhefi ngo-1852 futhi wavula i-kiosk ye-Tomaselli maqondana nesitolo ngo-1859. Umpheme wanezelwa ngo-1937/38 ngu-Otto Prossinger. Ngemuva kweMpi Yezwe Yesibili, umMelika wasebenzisa ikhefi ngaphansi kwegama elithi Forty Second Street Café.
Isikhumbuzo se-Mozart sika-Ludwig M. Schwanthaler
U-Ludwig Michael von Schwanthaler, inzalo yokugcina yomndeni womqophi we-Upper Austrian uSchwanthaler, wadala itshe lesikhumbuzo laseMozart ngo-1841 ngesikhathi sonyaka wama-50 wokufa kukaWolfgang Amadeus Mozart. Isithombe esibaziwe sethusi esicishe sibe ngamamitha amathathu ukuphakama, esakhiwe uJohann Baptist Stiglmaier, umqondisi wesizinda sensimbi yasebukhosini eMunich, samiswa ngo-September 4, 1842 eSalzburg maphakathi nendawo ngaleso sikhathi okwakuyiMichaeler-Platz.
Umfanekiso wethusi wakudala ubonisa i-Mozart isesimweni sokungqubuzana isiketi nejazi lesimanje, usiba, ishidi lomculo (umqulu) nomqhele we-laurel. Izifaniso ezibulawa njengezithombe zethusi zifanekisela umsebenzi kaMozart emkhakheni wesonto, wekhonsathi nomculo wegumbi kanye ne-opera. I-Mozartplatz yanamuhla yasungulwa ngo-1588 ngokubhidliza izindlu zamadolobha ahlukahlukene ngaphansi kukaMbhishobhi Omkhulu uWolf Dietrich von Raitenau. Indlu i-Mozartplatz 1 ibizwa ngokuthi yiNew Residence, lapho kuhlala khona i-Salzburg Museum. Isithombe se-Mozart singesinye sezifundo zekhadi leposi elidume kakhulu edolobheni elidala lase-Salzburg.
I-Drum Dome yase-Kollegienkirche e-Salzburg
Ngemuva kwendawo yokuhlala, idome yesigubhu seSonto LaseSalzburg Collegiate Church, eyakhiwa endaweni yaseParis Lodron University kusukela ngo-1696 kuya ku-1707 nguMbhishobhi Omkhulu uJohann Ernst Graf von Thun kanye noHohenstein ngokusekelwe kumiklamo ka-Johann Bernhard Fischer von Erlach ngaphansi kokuqondisa kuka. umakhi we-aster wasenkantolo u-Johann Grabner uhlukaniswe nge-octagonally ngemigoqo ephindwe kabili.
Eduze kwedome lesigubhu kunemibhoshongo enamapulangwe yeSonto LamaCollegiate, emakhoneni ayo ongabona izithombe eziqoshiwe. I-lantern, isakhiwo esivulekile esiyindilinga, sibekwe phezu kwedomu yesigubhu ngaphezu kweso ledome. Emasontweni e-Baroque, isibani cishe ngaso sonke isikhathi sakha ukuphela kwedome futhi simelela umthombo obalulekile wokukhanya kwemini okuthobile.
Izindawo zokuhlala e-Square Salzburg
I-Residenzplatz yasungulwa nguMbhishobhi Omkhulu u-Wolf Dietrich von Raitenau ngokususa umugqa wezindlu zedolobha e-Aschhof cishe ngo-1590, isikwele esincane esihambisana nesakhiwo esikhulu sanamuhla sase-Hypo e-Residenzplatz, esihlanganisa cishe u-1,500 m², kanye namathuna esonto lombhishobhi, elalisenyakatho ye- i-cathedral ekhona. Njengokuthatha indawo yamathuna esonto lombhishobhi, amathuna aseSebastian akhiwe eduze kwesonto lika-St. Sebastian ebhange elingakwesokudla ledolobha elidala.
Eceleni kwe-Aschhof futhi ngasezindlini zedolobha, udonga oluqinile lwaluzungeza amathuna esonto ngaleso sikhathi, udonga lwenqaba, olwalumele umngcele phakathi kwedolobhana lenkosana nelokishi. UWolf Dietrich naye walubuyisela lolu donga ngasesontweni elikhulu ngo-1593. Yakhiwa kanjalo isikwele esiphambi kwendlu yokuhlala endala nentsha, ngaleso sikhathi eyayibizwa ngokuthi isikwele esikhulu.
I-Court Arches Ixhumanisa i-Cathedral Square no-Franziskaner Gasse
Le ndawo ebizwa ngokuthi i-Wallistrakt, namuhla eyingxenye yeYunivesithi yaseParis-Lodron, yasungulwa ngo-1622 nguMbhishobhi Omkhulu uParis Count von Lodron. Lesi sakhiwo saqanjwa ngokuthi i-Wallistrakt kumhlali u-Maria Franziska Countess Wallis.
Ingxenye endala yepheshana laseWallis yilokho okubizwa ngokuthi yigceke lekhothamo lesakhiwo esinezitezi ezintathu ezakha udonga olusentshonalanga lwesikwele sesonto lombhishobhi. Izitezi zihlukaniswe ngemicu eyisicaba ephindwe kabili, ekhonkolowe evundlile okuhlala kuyo amafasitela. I-facade eyisicaba igcizelelwa ngokuqondile ngama-pilaster ekhoneni ane-rusticated kanye nezimbazo zewindi.
Isitezi esikhulu sebhilidi lekhothamo lenkantolo lalisesitezi sesi-2. Enyakatho, imingcele ophikweni oluseningizimu lwendawo yokuhlala, eningizimu, e-Archabbey yaseSt. Engxenyeni eseningizimu yesakhiwo sekhothamo kukhona iMuseum St. Peter, ingxenye yeDomQuartier Museum. Amafulethi ka-Wolf Dietrich's prince-bishop atholakala kule ndawo eseningizimu yesakhiwo sekhotho.
Ama-arcade ayihholo elinezinsika ezi-3, elinezitezi ezimbili elakhiwa ngo-2 ngaphansi koMbhishobhi Omkhulu uWolf Dietrich von Raitenau. Amakhothamo egceke axhuma i-Domplatz ne-axis i-Franziskanergasse Hofstallgasse, ehamba nge-orthogonally endaweni engaphambili yesonto lombhishobhi futhi yaqedwa ngo-1604.
Ngamakhothamo egceke umuntu wayengena emagcekeni esonto lombhishobhi evela ngasentshonalanga, njengokungathi udlula ekhothameni lokunqoba. I-"porta triumphalis", okwakuhloswe ngayo ukuthi ivuleke ngamakhothamo amahlanu esigcawini se-cathedral, yadlala indima ekupheleni kodwendwe lwenkosana-umbhishobhi omkhulu.
I-Salzburg Cathedral ihlukaniselwe ihll. URupert noVirgil. Uxhaso lugujwa ngoSepthemba 24, uSuku lukaSt. Rupert. I-Salzburg Cathedral iyisakhiwo seBaroque esavulwa ngo-1628 nguMbhishobhi Omkhulu uParis Count von Lodron.
Indawo yokuwela isempumalanga, ingxenye engaphambili yesonto lombhishobhi. Ngenhla kwendawo yokuwela kunedome yesigubhu esiphakeme esingamamitha angama-71 se-cathedral enamapilasta asekhona namafasitela angunxande. Edome kukhona amafresco ayisishiyagalombili anezigcawu zeTestamente Elidala emigqeni emibili. Izigcawu zihlobene nezigcawu ze-Pasion of Christ in the nave. Phakathi kwemigqa yamafresco kukhona umugqa onamafasitela. Izethulo zabavangeli abane zingatholakala ezindaweni ezingaphezulu zedome.
Ngaphezulu kwezinsika eziwelayo ezitshekile kukhona imihlobiso elengayo ye-trapezoidal eya ekuguqukeni ukusuka kuhlelo lwesitezi esiyisikwele sokuwela ukuya kusigubhu se-octagonal. Idome linomumo wendlu yezindela, enendawo egobile eba mncane ukuya phezulu ngaphezu kwesisekelo se-octagonal sesigubhu ohlangothini ngalunye lwepholigoni. Engxenyeni ephakathi nendawo kunesakhiwo esivulekile ngaphezu kweso ledome, isibani, lapho uMoya oNgcwele utholakala njengejuba. Ukuwela kuthola cishe konke ukukhanya okuvela ku-dome lantern.
E-Salzburg Cathedral kukhanya ukukhanya kwekwaya ye-single-nave, lapho kucwiliswa khona i-altare eliphakeme elizimele, isakhiwo esenziwe ngemabula enamapilasta kanye negebuli egobile, ephephethwayo. Ingaphezulu le-altare eliphakeme elinegable elingunxantathu elivunguzayo linefreyimu ewumqansa nama-cayatids. Iphaneli ye-altare ibonisa ukuvuka kukaKristu kanye neHll. U-Rupert no-Virgil kungcaphuno. Ku-mensa, itafula le-altare, kukhona i-reliquary ka-St. Rupert no-Virgil. URupert wasungula iSt. Peter, isigodlo sokuqala sezindela sase-Austria, uVirgil wayengu-abbot weSt. Peter futhi wakha isonto lombhishobhi lokuqala eSalzburg.
I-nave ye-Salzburg Cathedral ine-bayed ezine. I-nave eyinhloko ihambisana nezinhlangothi zombili ngomugqa wama-chapel nama-oratorio ngenhla. Izindonga zakhiwe ngama-pilaster aphindwe kabili ngokulandelana okukhulu, anama-shaft abushelelezi kanye nezihloko eziyinhlanganisela. Ngenhla kwama-pilaster kune-circumferential, cranked entablature lapho i-vault yomphongolo enezintambo eziphindwe kabili incike khona.
I-cranking umdwebo we-cornice evundlile ezungeze i-protrusion yodonga olume mpo, edonsa i-cornice phezu kwengxenye evelele. Igama elithi entablature liqondwa njengelisho yonke izakhi zesakhiwo ezivundlile ngaphezu kwezinsika.
Emakamelweni phakathi kwe-pilaster kanye ne-entablature kukhona ama-arcade aphezulu anama-arched, ama-balconi angaphandle aphumule kuma-volute consoles kanye neminyango ye-oratory enezingxenye ezimbili. Ama-Oratorios, amagumbi okukhuleka amancane ahlukene ahlukene, atholakala njengogodo kugalari ye-nave futhi aneminyango yegumbi elikhulu. Inkulumo yokukhuluma ngokuvamile ayivulekele umphakathi, kodwa igcinelwe iqembu elithile, isibonelo, abefundisi, amalungu ohlelo, abazalwane noma amakholwa avelele.
Izingalo eziguquguqukayo ze-single-nave kanye nekhwaya ngayinye ixhumeka ejokeni elingunxande endaweni yokuwela isikwele kusiyingi. Ku-conche, i-apse semicircular, ye-choir, i-2 yamafasitela angu-3 aphansi ahlanganiswe nama-pilaster. Ukushintshela ekuweleni kwe-nave eyinhloko, izingalo eziphambanayo kanye nekwaya kuvinjelwa izingqimba eziningi zama-pilaster.
I-trikonchos igcwele ukukhanya ngenkathi i-nave isebumnyameni obumaphakathi ngenxa yokukhanya okungaqondile kuphela. Ngokuphambene nepulani yaphansi njengesiphambano sesiLatini, lapho i-nave eqondile endaweni yokuwela iwela khona ngama-engeli angakwesokudla nge-transept eqondile ngokufanayo, ekwayeni enamakhontshi amathathu, ama-trikoncho, amakhontshi amathathu, okungukuthi ama-semicircular apses anosayizi ofanayo. , ezinhlangothini zesikwele zifana nalokhu okubekwe komunye nomunye ukuze uhlelo lwephansi lube nesimo seqabunga le-clover.
I-stucco emhlophe ene-motifs yokuhlobisa ikakhulukazi emnyama e-undercuts kanye ne-depressions ihlobisa ama-festons, ukubuka okuhlotshisiwe kusuka ngezansi kwama-arches, ama-chapel passages kanye nezindawo zodonga phakathi kwama-pilaster. I-stucco inweba ngaphezu kwe-entablature nge-tendril frieze futhi yenza ukulandelana kwezinkambu zejiyomethri ngamafreyimu ahlanganiswe eduze ku-vault phakathi kwama-chords. Iphansi le-cathedral liqukethe i-Untersberger ekhanyayo kanye nemabula ye-Adnet enombala obomvu.
IHohensalzburg Fortress itholakala eFestungsberg ngenhla kwedolobha elidala laseSalzburg. Yakhiwa ngu-Archbishop Gebhard, umuntu ogcotshiwe we-Archdiocese yase-Salzburg, cishe ngo-1077 njengesigodlo samaRoma esinodonga oluyindilinga oluzungeze isiqongo segquma. U-Archbishop Gebhard wayesebenza endlini yesonto yoMbusi u-Heinrich III, 1017 - 1056, iNkosi yamaRoma-German, uMbusi kanye noDuke waseBavaria. Ngo-1060 weza e-Salzburg njengombhishobhi omkhulu. Uzinikele kakhulu ekusungulweni kwesifundabhishobhi uGurk (1072) kanye nesigodlo sezindela saseBenedictine i-Admont (1074).
Kusukela ngo-1077 kuya phambili kwadingeka ahlale e-Swabia naseSaxony iminyaka engu-9, ngoba ngemva kokubekwa nokuxoshwa kuka-Henry IV wayesejoyine inkosi ephikisayo uRudolf von Rheinfelden futhi akakwazanga ukuphikisana no-Heinrich IV. ebubhishobhi bakhe abakhulu. Cishe ngo-1500 izindawo zokuhlala ngaphansi kuka-Archbishop Leonhard von Keutschach, owayebusa i-absolutist kanye ne-nepotist, zanikezwa ngokunethezeka futhi inqaba yanwetshwa ukuze ibe nokubukeka kwayo kwamanje. Ukuphela kokuvinjezelwa kwenqaba okungaphumelelanga kwenzeka ngeMpi Yabantu Abancane ngo-1525. Kusukela ekumisweni kobubhishobhi abakhulu ngo-1803, inqaba yaseHohensalzburg ibilokhu isezandleni zombuso.
Kakade ngeNkathi Ephakathi kwakukhona "i-Rosstümpel" e-Kapitelplatz, ngaleso sikhathi yayisephakathi nendawo. Ngaphansi kweNkosana uMbhishobhi Omkhulu uLeopold Freiherr von Firmian, umshana weNkosana u-Archbishop Johann Ernst Graf von Thun kanye no-Hohenstein, isakhiwo esisha sesiphambano esinamakhona agobile kanye ne-balustrade sakhiwa ngo-1732 ngokomklamo kaFranz Anton Danreiter, umhloli omkhulu waseSalzburg. izingadi zasenkantolo.
Ukufinyelela kwamahhashi emgodini wamanzi kuholela ngokuqondile eqenjini lezithombe eziqoshiwe, ezibonisa unkulunkulu wasolwandle uNeptune ene-trident kanye nomqhele ehhashi lasolwandle eliphuma amanzi elinama-triton angu-2 aphuma emanzini ezinhlangothini, izidalwa ezixubile, ingxenye yazo. inomzimba ongaphezulu womuntu kanye nomzimba ophansi ofana nenhlanzi onomsila womsila, endaweni eyi-Round arch niche e-aedicule ene-pilaster ephindwe kabili, i-entablature eqondile kanye ne-gable egobileyo ephezulu ethweswe imiqhele yokuhlobisa. Isithombe se-baroque, esinyakazayo senziwe umqophi wezithombe wase-Salzburg u-Josef Anton Pfaffinger, naye owaklama umthombo we-Floriani ku-Alter Markt. Ngenhla kwezifutho ezibukwayo kunechronogram, okubhalwe ngesiLatini, lapho osonhlamvukazi abagqanyisiwe benikeza inombolo yonyaka njengezinombolo, nejazi lezingalo elibaziwe likaMbhishobhi Omkhulu uLeopold Freiherr von Firmian endaweni yegebula.
Izindawo zokuhlala e- Hercules Fountain Salzburg
Enye yezinto zokuqala ozibonayo lapho ungena egcekeni eliyinhloko lendlu endala yokuhlala usuka e-Residenzplatz i-grotto niche enomthombo kanye no-Hercules ebulala udrako ngaphansi kwegceke le-vestibule esentshonalanga. Imidwebo ye-Hercules iyisikhumbuzo sobuciko obugunyaziwe be-Baroque obusetshenziswa njengendawo yezepolitiki. U-Hercules uyiqhawe elidume ngamandla akhe, isibalo sezinganekwane zamaGreki. Inkolo yamaqhawe yadlala indima ebalulekile kuhulumeni, ngoba ukukhalaza kwezibalo ze-semi-yaphezulu kwakumelela ukugunyazwa nokuvikelwa okuqinisekisiwe kwaphezulu.
Umfanekiso wokubulawa kukadrako nguHercules wawusekelwe ekwakhiweni kukaMbhishobhi Omkhulu u-Wolf Dietrich von Raitenau, owayenendawo yokuhlala entsha empumalanga yesonto lombhishobhi eyakhiwe kabusha kanye nendawo yokuhlala yombhishobhi omkhulu entshonalanga yesonto elikhulu elakhiwa kabusha.
Igumbi Lokuhlala Lenkomfa Salzburg Residence
U-Hieronymus Graf von Colloredo, umbhishobhi omkhulu wokugcina wenkosana yase-Salzburg ngaphambi kokuhlukaniswa kwenkolo ngo-1803, wayenezindonga zamakamelo ombuso wendawo yokuhlala ahlotshiswe ngemihlobiso emihle emhlophe negolide ngumdwebi wenkantolo uPeter Pflauder ngokuhambisana nokunambitheka kwe-classicist yangaleso sikhathi.
Izitofu zamathayela zakudala ezigciniwe zisuka kuma-1770s kanye nama-1780s. Ngo-1803 isimiso sombhishobhi omkhulu saguqulwa saba inhloko yezwe. Ngokuguqukela enkantolo yombuso, indawo yokuhlala yasetshenziswa umndeni wobukhosi base-Austria njengendawo yokuhlala yesibili. AbakwaHabsburg banikeze amagumbi kahulumeni ifenisha evela eHofimmobiliendepot.
Igumbi lenkomfa lilawulwa ukukhanya kukagesi kwama-chandelier angu-2, ekuqaleni ayehloselwe ukusetshenziswa namakhandlela, alenga ophahleni. Ama-Chamdeliers ayizici zokukhanyisa, ezibuye zibizwe ngokuthi "Luster" e-Austria, futhi okuthi ngokusetshenziswa kwemithombo yokukhanya eminingana nengilazi ukubuyisela ukukhanya kukhiqize umdlalo wezibani. Ama-chandelier avame ukusetshenziselwa izinjongo zokumelela emahholo agqanyisiwe.